အလုပ်စရှာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ နည်းဗျူဟာများ – Trend.com.mm
ကျောင်းပြီးလို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ရှာရပါပြီ ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရမလဲ? ကြုံရာပဲဝင်လျှောက်လိုက်ရမလား? လောလောဆယ်ဝင်ငွေရအောင်နီးစပ်ရာမှာပဲ လျှောက်တော့မယ် စသဖြင့် စသဖြင့်ခေါင်းခြောက်အောင်စဉ်းစားရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်အလုပ်ကိုမှမစခင် အလုပ်ရှာတော့မယ်ဆိုရင် အလုပ်မြန်မြန်ရှာတွေ့အောင် သိထားသင့်တဲ့နည်းဗျူဟာလေးတွေ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ပထမဆုံး အွန်လိုင်းကဖြစ်စေ၊သတင်းစာတွေထဲကဖြစ်စေ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ်၊ လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့အလုပ်တွေကို မှတ်ထား၊၀ိုင်းထားလိုက်ပါ။ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုချင်းစီကို ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပါ။ဒါက အချိန်ကုန်လည်းသက်သာစေပါတယ်။
၂။ဘာကိုလုပ်ချင်တာလဲစဉ်းစားပါဦး။အလုပ်တွေ့ပြီဆိုတိုင်း မလျှောက်ပါနဲ့၊ဒီအလုပ်က သင့်ရဲ့ ပထမဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းနဲ့ ဖိအားများပြီး နောက်ထပ်အလုပ်မလုပ်ချင်တော့ လောက်အောင်ဖြစ်မသွားဖို့သေချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။တကယ်ရောလုပ်ချင်ရဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားပါ။ပြီးမှ လျှောက်ပါ။
၃။အလုပ်လျှောက်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားပါ။အလုပ်လျှောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်၊မှတ်တမ်းတွေ၊အထောက်အထားတွေလိုအပ်ပါတယ်။နီးမှအသည်းအသန်မဖြစ်ရအောင် အလုပ်မရှာခင်တည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။အဲ့ဒါမှ အလုပ်တွေ့လို့ သွားလျှောက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းသွားလို့ရမှာပါ။
၄။အနီးအနားကနေရာတွေကိုအဓိကထားပါ။အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ၀င်ငွေရှာပြီးစုဆောင်းဖို့ပါ။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ အလုပ်က ကားနှစ်ဆင့်စီးရလို့ပိုက်ဆံပိုကုန်မယ်ဆိုရင် ကားတစ်ဆင့်တည်းနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမျိုး၊အေးအေးဆေးဆေးသွားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးကို အဓိကရွေးချယ်ပြီးဝင်ငွေစုဖို့ပြင်ဆင်ပါ။ဝေးနေရင်တောင် အသွားအပြန်နဲ့ တွက်ခြေကိုက်တဲ့လစာမျိုးရရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။
၅။မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကနေတစ်ဆင့် အလုပ်လျှောက်ပါ။ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ မယုံရတဲ့သူတွေလည်းများပါတယ်။တကယ်လို့ သင်လျှောက်မယ့်ကုမ္ပဏီမှာ သင့်သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်ရှိရင်သူတို့ကိုသင်အလုပ်လာလျှောက်မယ့်အကြောင်းပြောပြထားပါ။လိုအပ်ရင်သူတို့က သင့်အကြောင်းကိုကုမ္ပဏီကိုပြောပြထားနိုင်ပါတယ်။မသိတဲ့သူထက်စာရင် ရင်းနှီးပြီးယုံကြည်ရတဲ့သူရဲ့ ထောက်ခံချက်ရရင် အလုပ်ပိုပြီးရနိုင်ပါတယ်။
၆။အင်တာဗျူးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါဒါကတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ အလုပ်သွားလျှောက်ပြီဆိုတာနဲ့အင်တာဗျူးဖြေရတော့မှာပါ။အဲ့ဒီအခါမှာ သင့်ဘက်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာထားပါ။ အင်တာဗျူးမှာ သင်ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာ အဓိကထားပြောပါ။ကြောက်လန့်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုပါ။အင်တာဗျူးဖြေတော့မယ်ဆိုရင် အဓိကက အချိန်မှန်ရောက်ဖို့နဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံသပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိဖို့ကလည်း လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်အရာမဆို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။
ကဲ အလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေ Good Luck နော်။
ကြောငျးပွီးလို့လုပျငနျးခှငျဝငျတော့မယျဆိုတာနဲ့ ရှာရပါပွီ ဘယျအလုပျကိုလုပျရမလဲ? ကွုံရာပဲဝငျလြှောကျလိုကျရမလား? လောလောဆယျဝငျငှရေအောငျနီးစပျရာမှာပဲ လြှောကျတော့မယျ စသဖွငျ့ စသဖွငျ့ခေါငျးခွောကျအောငျစဉျးစားရပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ ဘယျအလုပျကိုမှမစခငျ အလုပျရှာတော့မယျဆိုရငျ အလုပျမွနျမွနျရှာတှအေ့ောငျ သိထားသငျ့တဲ့နညျးဗြူဟာလေးတှေ မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
၁။ပထမဆုံး အှနျလိုငျးကဖွဈစေ၊သတငျးစာတှထေဲကဖွဈစေ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောမယျ၊ လုပျနိုငျမယျလို့ထငျတဲ့အလုပျတှကေို မှတျထား၊ဝိုငျးထားလိုကျပါ။ပွီးတော့မှ အဲ့ဒီအလုပျတဈခုခငျြးစီကို ပွနျပွီးဆနျးစဈပါ။ဒါက အခြိနျကုနျလညျးသကျသာစပေါတယျ။
၂။ဘာကိုလုပျခငျြတာလဲစဉျးစားပါဦး။အလုပျတှပွေီ့ဆိုတိုငျး မလြှောကျပါနဲ့၊ဒီအလုပျက သငျ့ရဲ့ ပထမဆုံးအလုပျဖွဈတဲ့အတှကျတဈခါတညျးနဲ့ ဖိအားမြားပွီး နောကျထပျအလုပျမလုပျခငျြတော့ လောကျအောငျဖွဈမသှားဖို့သခြောစဉျးစားဖို့လိုပါတယျ။တကယျရောလုပျခငျြရဲ့လားဆိုတာစဉျးစားပါ။ပွီးမှ လြှောကျပါ။
၃။အလုပျလြှောကျဖို့အတှကျအသေးစိတျပွငျဆငျထားပါ။အလုပျလြှောကျပွီဆိုရငျကိုယျရေးရာဇဝငျ၊မှတျတမျးတှေ၊အထောကျအထားတှလေိုအပျပါတယျ။နီးမှအသညျးအသနျမဖွဈရအောငျ အလုပျမရှာခငျတညျးက ကွိုတငျပွငျဆငျထားပါ။အဲ့ဒါမှ အလုပျတှလေို့ သှားလြှောကျတော့မယျဆိုတာနဲ့ ခကျြခငျြးသှားလို့ရမှာပါ။
၄။အနီးအနားကနရောတှကေိုအဓိကထားပါ။အလုပျလုပျတယျဆိုတာ ဝငျငှရှောပွီးစုဆောငျးဖို့ပါ။ တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ အလုပျက ကားနှဈဆငျ့စီးရလို့ပိုကျဆံပိုကုနျမယျဆိုရငျ ကားတဈဆငျ့တညျးနဲ့ရောကျတဲ့နရောမြိုး၊အေးအေးဆေးဆေးသှားလို့ရတဲ့နရောမြိုးကို အဓိကရှေးခယျြပွီးဝငျငှစေုဖို့ပွငျဆငျပါ။ဝေးနရေငျတောငျ အသှားအပွနျနဲ့ တှကျခွကေိုကျတဲ့လစာမြိုးရရငျတော့တဈမြိုးပေါ့။
၅။မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေနတေဈဆငျ့ အလုပျလြှောကျပါ။ဒီနခေ့တျေကွီးထဲမှာ မယုံရတဲ့သူတှလေညျးမြားပါတယျ။တကယျလို့ သငျလြှောကျမယျ့ကုမ်ပဏီမှာ သငျ့သူငယျခငျြး၊ မိတျဆှတေဈယောကျယောကျရှိရငျသူတို့ကိုသငျအလုပျလာလြှောကျမယျ့အကွောငျးပွောပွထားပါ။လိုအပျရငျသူတို့က သငျ့အကွောငျးကိုကုမ်ပဏီကိုပွောပွထားနိုငျပါတယျ။မသိတဲ့သူထကျစာရငျ ရငျးနှီးပွီးယုံကွညျရတဲ့သူရဲ့ ထောကျခံခကျြရရငျ အလုပျပိုပွီးရနိုငျပါတယျ။
၆။အငျတာဗြူးအတှကျကွိုတငျပွငျဆငျပါဒါကတော့ပွောစရာလိုမယျမထငျပါဘူး။ အလုပျသှားလြှောကျပွီဆိုတာနဲ့အငျတာဗြူးဖွရေတော့မှာပါ။အဲ့ဒီအခါမှာ သငျ့ဘကျက အဆငျသငျ့ဖွဈနဖေို့လိုပါတယျ။ကုမ်ပဏီအကွောငျးကိုလညျးလလေ့ာထားပါ။ အငျတာဗြူးမှာ သငျဘာတှလေုပျနိုငျလဲဆိုတာ အဓိကထားပွောပါ။ကွောကျလနျ့တှနျ့ဆုတျမနပေါနဲ့။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့သူတို့ရဲ့မေးခှနျးတှကေိုဖွဆေိုပါ။အငျတာဗြူးဖွတေော့မယျဆိုရငျ အဓိကက အခြိနျမှနျရောကျဖို့နဲ့ဝတျစားဆငျယငျပုံသပျသပျရပျရပျရှိဖို့ကလညျး လိုအပျပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ ဘယျအရာမဆို ကွိုတငျပွငျဆငျထားပါ။
ကဲ အလုပျရှာနတေဲ့သူတှေ Good Luck နျော။